Global Voices teny Malagasy · 12 Jona 2019
12 Jona 2019
Tantara tamin'ny 12 Jona 2019
Enga anie ny fahatsiarovana an'i Gershom hitoetra ato anatin'ireto hazo dimy ireto
Mediam-bahoaka12 Jona 2019
Nanomana ny fambolena hazo miisa dimy izahay tany Afrika Atsimo ho fahatsiarovana an'i Gershom ho mariky ny firaisam-ponay lalina aminy .
Ny tantaran'ny vatsy bitika Rising Voices
Fantatrao ve fa naharay fifaninana famatsiam-bola madinika miisa 10 ny Rising Voices tao anatin'ny 8 taona? Fantatrao ve fa nahazo fangatahana miisa 4.075 izahay nandritra io fotoana io? Raha totaliana, nanome famatsiam-bola sy nandrafitra tetikasa miisa 57 isankarazany manerantany izahay.
Ny lahatsoratro GV voalohany
Mpanolontsaina amin'ny serasera nanoratra momba ny tontolo iainana sy ny zon'ny vahoaka i Avinash Kumar Chanchal. mpandika teny GV Hindi. Indraindray izy manoratra tantara ary indraindray mpaka sary ihany koa.
Diarin'ny Fonja [ Prison Diaries]
Fampidirana: Tetik'asa vaovao ataon'ny Students Expressing Truth [Mpianatra maneho ny marina] ny Prison Diaries [Diarin'ny Fonja], fandaharana fanarenana ifanaovan'ny mpiray voafonja izay mifantoka amin'ny fahombiazan'ny fampiatiana ireo gadra ao amin'ny fiarahamonina jamaikana aorian'ny famotsorana azy ireo. Ampanaovan'ny Prison Diaries fanazarana ny voafonja notsongaina amin'ny fomba hibilaogena sy handraketam-peo ny zava-misy iainany...
Jereo sarintany lehibe kokoa Teny Fampidirana : Manofana mpanampy mpitsabo, dokotera ary ekipa amin'ny fampiasana fitaovana fandraketam-peo sy horonantsarimihetsika mba ahafahana mizara mivantana ny tantaram-piainan'ireo marary tratran'ny aretina mety hahafaty ny Hospice Casa Sperantei, ao Brasov, ao Romania. Mampiasa bilaogy ihany koa ny mpiandraikitry ny Ivontoerana mba ahafahana manazava ireo...
Mampiasa lahatsoratra, sary, podcasts (fandraketam-peo), ary lahatsary an-tserasera i Pavel Kutsev avy ao amin'ny Drop-in Center mba hizarana ireo zava-niainany amin'ny toerana fampihenana fanaintainana manimba ao Kyiv, Okraina.
Dizha Kieru ("Feonay" amin'ny fiteny Zapotec) dia onjam-peom-pokonolona ao an-tananan'ny Zapotec zanatany Talea de Castro izay miorina ao amin'ny tendrombohitra Juarez ao Oaxaca, Meksika.
Akanin'ny iray amin'ireo [firenena] demaokraty faran'izay tanora indrindra eran'izao tontolo izao i Bhutan
Nanomboka toy ny tolo-kevitra roa miavaka avy any Medellín, Kolombia ny tetikasa HiperBarrio.